I-ALYSSA MILANO-YENET EFANELEKILEYO, I-BIO, I-WIKI, UBUDALA, I-CAREER, UBUDE, UMHLA WOKUZALWA - IINDABA
I-Alyssa Milano-yeNet efanelekileyo, i-Bio, i-Wiki, ubudala, i-Career, ubude, umhla wokuzalwa
Iminyaka engama-47 ubudala
Ixesha lemeya 3 isiqendu 7
IBrooklyn, eNew York, eMelika
Malunga no-Alyssa Milano
UAlyssa Milano ngumlingisi waseMelika, umvelisi kunye nomzabalazo kwezopolitiko. UAlyssa waziwa ngendima yakhe njengoSamantha Micelli kwi Who's the Boss? eneminyaka eyi-10, uJennifer Mancini eMelrose Place, uPhoebe Halliwell eCharmed, uBillie Cunningham eGameni lam ngu-Earl, uSavannah Savi Davis eMistresses, uRenata Murphy kwiHlabathi laseMelika elishushu elishushu: Iminyaka eli-10 kamva kunye noCoralee Armstrong abanganyamezelekiyo. UMilano ungene kwindawo ebonakalayo eneminyaka eyi-8, xa wayevela kukhenketho lukazwelonke lomculo u-Annie. Kunye nendima yakhe yescreen, umdlali weqonga useke iTouch nguAlyssa Milano umgca wezemidlalo wabasetyhini kwaye wenza inoveli yemifanekiso iHacktivist. Uqale ukubonakala kwifilimu ngo-Agasti 1984.
Ngendima yakhe njengoSamantha Micelli ku Ngubani uBoss?.
Ukuba ngumdlali weqonga waseMelika.
Umthombo: @ refinery29
Ubomi bokuqala buka-Alyssa Milano
U-Alyssa wazalwa nge-19 kaDisemba ngo-1972 kwisiXeko saseNew York, igama elipheleleyo lase-US Milano okanye igama lokuzalwa ngu-Alyssa Jayne Milano. Ubuzwe bakhe baseMelika ngelixa ubuhlanga ubuMerika-Mhlophe. Umdyarho wakhe umhlophe kwaye uphawu lweenkwenkwezi nguSagittarius. Ubhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe nge-19 ka-Disemba minyaka le kwaye ebebhiyozela iminyaka engama-47 yokuzalwa ngo-2019. Unomntakwabo ogama linguCory, oneminyaka elishumi kumncinci wakhe, kwaye bangabakhokho base-Italiya. Ukhule engumRoma Katolika.
Umsebenzi ka-Alyssa Milano
U-Alyssa uphuma emsebenzini wakhe eneminyaka esi-7, xa umntwana wakhe, ngaphandle kokwazisa abazali baka Milano, wamsa kuvavanyo lwenxalenye ezine eziphambili kwinkampani yokhenketho yesizwe ka-Annie. Wayengomnye wabane abakhethwe kumantombazana angaphezu kwe-1,500.
Xa wayehamba nomhlobo wakhe kwimveliso ka-Annie kwiofisi ye-arhente yaseNew York, uAlyssa waziswa kwiarhente eyaqala ukumela.
Akaziva ukuba ukukhula phambi kwekhamera kwakulimaza ubuntwana bakhe kwaye uthe: Ndiyaluthanda usapho lwam kakhulu baluxhasa nyani umsebenzi wam. Ndizithatha njengesiqhelo: Ndiye ndacoca igumbi lam ndincedisa ekhitshini.
U-Alyssa wenza umboniso wakhe wokuqala kumdlalo weqonga we-Old Enough ngo-Agasti 1984, awakhumbula njengeyona ndlela yokuqalisa. Ifilimu ibonisiwe kwi-Sundance Film Festival, apho yaphumelela khona uMvuzo wokuqala.
Waphicothwa njengentombi kaTony Danza kwi-sitcom Ngubani umphathi? emva kokuphumelela le ndima, yena nosapho bakhe bafudukela eLos Angeles, apho kwaveliswa khona lo mboniso. Yayiqala kwi-ABC nge-20 kaSeptemba 1984.
Olu luhlu lwamseka njengesithixo esikwishumi elivisayo kwaye lwamnika amathuba ezinye iindima. Imfundo yakhe yahlulwa phakathi kwesikolo kunye nomqeqeshi osetyiweyo oza kusebenza noMilano iiyure ezintathu ngosuku.
Wadlala indima kwi-Commando njengoJenny Matrix, intombi kaJohn Matrix (Arnold Schwarzenegger) eneminyaka eyi-12.
Eqongeni, wadlala indima kwiThenda yokuNikezelwa, umdlalo omnye obhalwe nguWendy Wasserstein, All Night Long ngumbhali wemidlalo waseMelika uJohn O'Keefe, kunye nomculo wokuqala waseMelika kaJane Eyre.
UMilano ubuyile kwindawo yemidlalo yeqonga ngo-1991, evelisa kwaye esenza inkwenkwezi kwimveliso yaseLos Angeles yee-Butterflies Simahla ukusuka nge-26 kaDisemba 1991, ukuya kwi-19 kaJanuwari 1992.
Iialbham zakhe, azichaze njenge-bubblegum pop, yafumana iplatinum kweli lizwe, nangona kamva wagxeka umgangatho wabo womculo.
Emva koko, u-Alyssa obekade kwifilimu yabantwana iThe Canterville Ghost, engakhange ifezekise indumiso okanye ingqalelo.
Wenza inkwenkwezi kwiifilimu zethelevishini ezimbini zowe-1988, iCrash Course kunye noMdaniso 'til Dawn.
UMilano uvelise ividiyo yolutsha, u-Teen Steam, kwaye wazuza udumo ngaphandle kwe-US ngomculo wakhe, owaqhubeka de kwaba li-1990s yokuqala.
Kwangelo xesha, u-Alyssa wabhala ikholamu yeveki ebizwa ngokuba yi-Alyssa, enothando ngemagazini yolutsha iTeen Machine.
Wadlala ihenyukazi elikwishumi elivisayo kwifilimu ezimeleyo ka-1992 apho uSuku uthatha khona. Ifilimu, egxile kwiqela lolutsha olubalekayo kunye nolutsha olungenamakhaya. Yatyunjelwa imbasa yabaGxeki kuMnyhadala weFilimu waseDeaville kwaye yaphumelela imbasa yeGolide yeNaliti kwiSeattle International Film Festival.
Uthe ukubonakaliswa kwakhe kukaFisher kwifilimu, eyayisekwe kwimbono ka-Buttafuoco, yayiyeyona incinci 'i-Alyssa' yayo nantoni na [ayenzileyo]. Ifilimu yenziwa nge-Novemba ukuya ku-Disemba 1992.
Kwii-1990s zakuqala, waphicotha phantse yonke indima yakhe kwifilimu kubudala bakhe, kubandakanya iimovie ze-B, kwaye ekugqibeleni wazama ukuphalaza intombazana yakhe entle. U-Alyssa uthe ukubonakala kwabo abahamba ze kwamfundisa ukuba aqale afune ubuzaza kwiikhontrakthi zakhe ezimnika ulawulo olupheleleyo kuzo zonke izinto azenzileyo.
Kudliwanondlebe lwango-1995, wachaza inkuthazo yakhe yeminye imiboniso ecacileyo kwi-Embrace of the Vampire: andizukuthi ndiye ndaqhathwa ndenza izinto ebendingafuni ukuzenza. Ndiyenzile kuba yayingumlawuli wabasetyhini kwaye ndaziva ndikhuselekile. Kwaye ndifunde okuninzi ngokwazi ukuba iphi na ikhamera kwaye yeyiphi eyona nto bayifunayo ukuze ingacaci konke.
UMilano ubekhe wadlala kwezinye iindima, ezinje ngamakhandlela ebumnyameni, ukuvuma kweNtombazana eyoyikisayo, iAurrogate, ukuya kwi-Brave Alaska kunye noloyiko, ezingakhange zifumane uphononongo oluqinisekileyo, nangona uJack Matthews weLos Angeles Times abize intsebenzo kaMilano ngokoyika kakhulu Kulungile.
UAlyssa obekade kwindima ephambili kwiHugo Pool (1997).
Wanikwa indima kaJennifer Mancini kumdlalo weqonga iMelrose Place ngasekupheleni kuka-1996 ngumvelisi uAaron Spelling: Besikhangela umntu oqaqambileyo. UAlyssa wayenyanisile.
Ngo-1998, uMilano waphoswa njengoPhoebe Halliwell, omnye wabalinganiswa abathathu abakhokelayo kumdlalo weSpelling's Charmed. Olu luhlu lubaleke amaxesha asibhozo, kugqitywa ngo-2006. Wadlala umdla wothando lukaMark Hoppus kwividiyo yomculo ka-Blink-182 kaJosie kwi1998.
Kwii-2000s zakudala, u-Alyssa wadlala u-Eva Savelot kwi-MCI Inc. intengiso yaloo nkampani ye-1-800-QOKELELA umkhankaso.
Umsebenzi wakhe wokurhweba waquka iintengiso ezimbini zikamabonakude zikaVet kunye neSheer Cover ngo-2007. Ngelo xesha wabonakala kwiziqendu ezilishumi zegama lam ngu-Earl.
Wayeyinxalenye ye-TBS ekhethekileyo yokugubungela ukufakwa kwikona eshushu ye-2007 Major League baseball playoffs. Umlandeli weLos Angeles Dodgers, ngo-Epreli 2007, uMilano waqala ukubhala ibhlog ye-baseball kwiwebhusayithi ye-Major League Baseball.
Usungule umqondiso wakhe otyikityiweyo wengubo yeqela labalandeli bebaseball yabasetyhini, eyithengisa ngebhlog yakhe kwiwebhusayithi yeMajor League yeBhola ekwakulo nyaka ikwafumaneka ngo-2009 kwivenkile ethengisa izinto eseCiti Field, kwikhaya leNew York Mets .
Kwi-2008, wayandisa loo kwibhola ekhatywayo yeNFL njengomlandeli weeNew York kwaye wabonisa ezinye zonxibelelwano losapho kunye neeGiants. Ngo-2013, uMilano wandise iTouch kwiNASCAR.
Kwabhengezwa ukuba uMilano uvakalise uGqirha Ilyssa Selwyn kwiGhostbusters: Umdlalo weVidiyo nge-20 kaMatshi ka-2009. Kudliwanondlebe luka-2010, u-Alyssa uxelele oonondaba ukuba 'uqhushumbo' usebenza kulo mdlalo, nangona eyikhumbula 'ingumnqa' kufuneka ndigqume egumbini kuphela.
Incwadi yakhe kwi-fandom yakhe ye-baseball, Ekhuselekileyo Ekhaya: Ukuvuma kwe-fanatic ye-Baseball, yakhutshwa nge-24 kaMatshi 2009.
Usayine ukuba adlale kwaye avelise i-Girlfriend's Boyfriend, i-comedy yothando apho adlala khona umfazi onengxaki yobudlelwane.
Uvelise kwaye wakhokela abalingisi beLifetime yeTV bhanyabhanya ngeCawe eTiffany eyayiyintsebenziswano yakhe yesibini noLifetime, emva koWisegal (2008).
UAlyssa wabonakala kwiifilimu ezimbini ezihlekisayo, iHolo yokuDlula kunye noEva woNyaka oMtsha ngo-2011.
Wenza uthotho lweencwadi ezihlekisayo, iHottivist, eyabhalwa nguJackson Lanzing kunye noCollin Kelly, ezotywe nguMarcus To, yaza yapapashwa yiArchaia Entertainment ngo-2013. Olu chungechunge lwafumana uphononongo oluqinisekileyo, kuba ngoku linamanqaku ayi-8.1 kwali-10 uphonononge i-aggregator iwebhusayithi yeComic Book Roundup.
UMilano wadlala uSavannah Davis kumdlalo weqonga we-ABC Mistresses ngoJuni 2013, emalunga nobomi obuhlazo bamantombazana amane, kodwa wawushiya umboniso emva kwexesha lesibini, ngenxa yongquzulwano phakathi kwendawo yokufota kunye nomba wosapho.
Utyikitye njengomphathi kunye nejaji ye-Runway Runway: Zonke iiNkwenkwezi ziqala ngexesha lesithathu kwaye zazingumsasazi weendwendwe kwiThe Talk nge-2 kaMatshi 2015.
Uzibandakanye nabalingisi bezihloko ezibini zokuhlekisa zeNetflix: Amanzi ashushu asehlotyeni aseMelika: Iminyaka elishumi kamva kwaye engoneliseki ngo-2017 nango-2018.
Kwi-2018 Milano waphoswa kwindima ekhokelayo kwiLingelo leSiphelo, esekwe kwincwadi ethengiswa kakhulu nguJane Green.
Kwi-2020, uya kuphinda abuye kwihlaya leQuibi ngoku.
U-Alyssa Milano usithathele ingqalelo isiciko samaphephancwadi amaninzi, aquka i-Cosmopolitan, i-Stuff, i-Seventeen, i-Cleo, i-Woman's World, i-Veronica, i-Maxim kunye ne-FHM. Ukhe wavela nakwimifanekiso yePlayboy, yoLusu oluDumileyo, uSleuth woSaziwayo, iNkulumbuso, kunye noMbutho oPhakamileyo. Uvele kwiintengiso zikamabonwakude zeWen, iiPipi, iiVeet, iHi-C, kunye nokutya kweAtkins. Wayesisithethi sezinto zokuthambisa ze-Sheer Cover.
U-Alyssa waqhagamshelana noRyan White, inkwenkwe yesikolo eyakhethwe ngaphandle ngenxa yokuba noGawulayo, kunye nomlandeli wayo ngasekupheleni kweminyaka yoo-1980.
Wayezimase itheko elikhulu apho wayehleli khona naye iiyure ezintandathu esenza iisongo. Babonakala kunye kwiPhil Donahue Show, apho wamanga khona uMhlophe, ukuze abonise ukuba akasibambi esi sifo ngokunxibelelana naye.
UMilano uthathe inxaxheba kwi-UNICEF's Trick or Treat campaign njengesithethi sikazwelonke ngo-Okthobha u-2004.
Wonyusa malunga ne-US $ 50 000 yabasetyhini baseMzantsi Afrika kunye nabantwana abanesifo sikagawulayo ngokuthengisa umsebenzi wakhe nowefoto yezikolo.
Ukuxhasa i-PETA, uMilano ubonakele kwintengiso ka-2007 kubo, ekhuthaza ukuba abantu batye imifuno, kwisinxibo esenziwe ngokupheleleyo semifuno.
IZiko lokuThwala iSabin, elathiya uMilano njengeNxusa eliSungula iNethiwekhi yeHlabathi yeZifo eziNgekhoyo eTropiki, umanyano olwenzelwe ukukhuthaza kunye nokuhlanganisa izixhobo kumlo wokulawula izifo zetropiki ezingakhathalelwanga, apho uMilano wanikela nge-US $ 250,000 ngoJuni 2007.
Umsebenzi wakhe wasentsimini kulo mbutho ubandakanye uhambo luka-2004 oluya eAngola ukuya kuthetha nabantu basetyhini abane-HIV nabantu abakhubazeke ngemigodi yomhlaba ngexesha lemfazwe yamakhaya yelizwe; uhambo oluya e-India ukuya kudibana noomama abahlala ematyotyombeni emva kwetsunami ka-2004, kunye nohambo luka-2010 lokuhlala eKolonia kwintshona yeKosovo ukuya kungqina iimeko zokuphila ezihlwempuzekileyo.
Ubaleke iphulo lokunyusa ingxowa mali kwi-Intanethi: Amanzi ngomhla wokuzalwa kwakhe engama-37, eyenzeka ngomhla we-19 kuDisemba 2009.
Injongo yokuqala kaMilano yayikukunyusa i-US $ 25,000, kodwa umnikelo ovela kumyeni wakhe wambeka ngaphezulu kwe-US $ 75,000 nge-18 kaDisemba. Ingxowa-mali iqhubeke kude kube nge-26 kaDisemba.
NgoSeptemba 2013, wakhupha i-tape ye-virus kwi-Funny okanye i-Die eyayiqwalasela imfazwe yombutho waseSiriya.
UMilano uxhase uBernie Sanders kuMongameli wase-United States ngo-2015.
Ngo-2016, emva kokhetho lukaMongameli lwe-Democratic Party, u-Alyssa wavakalisa inkxaso yakhe kumgqatswa kamongameli uHillary Clinton. Wayebandakanyeka kwimizamo yokuphuma evotweni kaRob Quist.
Wayephefumlelwe ukuba azise ulwazi malunga nokuxhaphaka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo phakathi kwabasetyhini emva kokugxothwa kukaHarvey Weinstein ovela kwiAkhademi yoBugcisa beMifanekiso yoBugcisa kunye neNzululwazi ngezityholo zolwaphulo-mthetho ngokwesondo ngokuchasene nabasetyhini kumzi mveliso wefilimu.
UMilano ubhenele abagqatswa bakazwelonke, bakarhulumente, kunye nabasekhaya ukusukela ngo-2004.
Kwi-Alabama 2017, umnxeba wakhe wagcina ebhankini kunye noPiper Perabo kwaye waqhubela abantu kwi-polls ze-United States Senate ukhetho olukhethekileyo ngomhla we-12 kuDisemba 2017, ukuvotela umgqatswa weDemokhrasi uDoug Jones.
U-Alyssa nomdlali weqonga uChristopher Gorham baqhuba abavoti ngexesha lokuvota kwangoko nange-27th ka-Matshi 2017, kunyulo lwesithili sase-Georgia sonyulo olukhethekileyo luka-2017 lukaJon Ossoff, kwaye kamva wathumela iifoto zakhe nabavoti kwi-Instagram.
U-Alyssa Milano wabhengezwa njengesihlalo sobambiswano lomkhankaso we-Health Care Voter campaign ngo-2018. Ukhuphe i-op-ed kwiphephancwadi iTime ngokuba kutheni ukhathalelo lwempilo luza kuthatha isigqibo sokuvota kwakhe ngo-2018.
Uncede ekunyuseni imali URichard Dien Winfield, uMdemokhrasi kwi-2018 ye-10 ye-10 yesithili sebandla.
U-Alyssa, obethetha ngo-Matshi wama-2018 ka-Mayi, wala ukuthatha inxaxheba kwi-2019, ecaphula ukusilela kweenkokheli zango-Matshi zika-2019 u-Tamika Mallory kunye no-Linda Sarsour ukuba bagwebe u-homophobia, i-antisemitism, kunye ne-transphobia ye-Nation of Islam inkokheli u-Louis Farrakhan.
Ukhuthaze ukungatshati ngendlela yoqhankqalazo ngesondo ukuziphindezela kumthetho osandula ukwenziwa wokuqhomfa kwilizwe lase-Georgia lase-Georgia ngoMeyi 2019.
U-Alyssa uvumile owayesakuba ngusekela Mongameli wase-US uJoe Biden njengo-Mongameli wase-United States ngo-Matshi 2020. Uye walile ukurhoxa ekuvumeleni kwakhe uBiden nangona wayehlaselwa.
Nge-27th ka-Epreli, u-Alyssa wathumela umyalezo ngetwitter ukuba wayenolwazi ngezinto ezintsha ezenzeka kwisityholo sikaTara Reade nxamnye noJoe Biden. Ndifuna uTara, njengawo onke amanye amaxhoba, afumane indawo yokumanyelwa nokubonwa ngaphandle kokusetyenziswa njengokutya. Ndiyakuva kwaye ndiyakubona, Tara.
Kwi-op-ed yomhla obekiweyo, waphindaphinda inkxaso yakhe kwi-Biden kwaye wacinga ukuba abafazi abakholelwayo zange babenakho malunga 'nokukholelwa kubo bonke abantu basetyhini nokuba bathini na,' ibingokutshintsha inkcubeko yokungakholelwa kwabasetyhini ngokungagqibekanga ngomhla wama-28 ku-Epreli.
Utyhile ukuba kuvavanyiwe ukuba unentsholongwane ye-coronavirus.
Uye wathi iziphumo zakhe ezichaseneyo neentsholongwane ziye zavela emva kokuba efumene izinto ezintathu ezingezizo, ngaphandle kokufumana zonke iimpawu ze-COVID ngasekupheleni kuka-Matshi.
Le yayindim nge-2 ka-Epreli emva kokugula iiveki ezi-2, wafota ifoto yakhe enxibe imaski yeoksijini. Andizange ndagula ngolu hlobo. Yonke into ibuhlungu. Ukuphulukana nevumba. Kwakungathi indlovu yayihleli esifubeni sam. Khange ndikwazi ukuphefumla. Bendingakwazi ukugcina ukutya kum. Ndiphulukene neeponti ezili-9 kwiiveki ezi-2. Ndandibhidekile. Umkhuhlane ophantsi. Kwaye iintloko zazisoyikeka.
U-Alyssa uthe iimpawu zakhe zamqhubela ekubeni athathe iimvavanyo ezimbini ze-COVID-19 swab ekupheleni kuka-Matshi kwaye zombini zazingalunganga.
Ngaphandle kweziphumo ezibi, wathi uneempawu zokungahambi kakuhle kwiinyanga ezine ezizayo, kubandakanya i-vertigo, isisu esingaqhelekanga, amaxesha angaqhelekanga, ukubetha kwentliziyo, ukuphefumla kancinci, inkumbulo yexesha elifutshane, kunye ne-malaise ngokubanzi, ekhokelele ekubeni avavanywe. kwakhona.
Amabhaso kunye nokufezekiswa kuka-Alyssa Milano
Umlingisi oMncinci oNika inkxaso kuThotho lweTV
Ukusebenza ngokuKhethekileyo ngoMdlali weQonga oMncinci oBalaseleyo kwiNqaku leFilimu-uKomidi okanye iDrama
Eyona Superstar yabasetyhini iQhelekileyo kwiTV
Olona mdlali mtsha ulungileyo kwi-TV Pilot ekhethekileyo, kwiMovie yeVeki, okanye kwiMini-Series
Amabhaso oKhetho lwaBantwana
Amabhaso okhetho lwabaselula
Amabhaso oKhetho aBantu
Amabhaso oKhetho lwaBasetyhini
IQELA leGLAAD Gala
Ubomi bobuqu buka-Alyssa Milano
Ngokubhekisele kubomi bobuqu bukaMilano, ungumfazi otshatileyo. Utshate imvumi uCinjun Tate nge-1 kaJanuwari ka-1999. Kodwa bohlukene ngomhla we-20 kuNovemba ngo-1999 kwaye baqhawula umtshato ngomhla wokuqala kwinyanga yoMnga ngo-1999. Ngempumelelo wazama ukufumana uncedo lukaHaim ngesiyobisi sakhe. Ngo-1993, wazibandakanya nomlingisi uScott Wolf, kodwa bakuphelisa ukubandakanyeka kwabo kunyaka olandelayo. Phakathi kuka-2001 ukuya ku-2003, u-Alyssa wayethandana nomlingane wakhe oCharmed, uBrian Krause. Emva konyaka bethandana, u-Alyssa wazibophelela kwiarhente yeArhente yamaGcisa yokuDala uDavid Bugliari ngoDisemba 2008. Batshata nge-15th ka-Agasti 2009, kwikhaya losapho lakwaBugliari eNew Jersey. U-Alyssa kunye no-Bugliari banonyana, owazalwa ngo-Agasti ka-2011, kunye nentombi, eyazalwa ngo-Septemba ka-2014. Ngo-Agasti ka-2019, waveza ukuba wayekhuphe izisu ezibini ngo-1993 xa wayethandana nomdlali weqonga uScott Wolf. UMilano wasebenzisa ulawulo lokuzalwa kodwa wakhulelwa nangona kunjalo. Ngo-1998, wasebenzisa iiwebhusayithi zabantu abadala ngokusetyenziswa okungagunyaziswanga kwemifanekiso enganxibanga evela kwiifilimu zakhe. Ityala lakhe le-2017 US $ 10 yezigidi ngokuchasene nomphathi weshishini lakhe likhokelele kwisikhalazo. Kwaye xa ethetha malunga nokuqhelana ngesondo noMilano, uthe tye.
Ikwindla yokugqibela ephelileyo
Umthombo: @ eonline.com
Ubungakanani beNet ka-Alyssa Milano
Ukuqhubela phambili kwi-net ye-Alyssa, ixabiso lakhe lilonke kwizigidi zeedola. Ixabiso lakhe lilonke lijikeleze $ 10 yezigidi zeedola ngo-2020. Unemali entle, ekumawaka eedola. Ufumene isixa semali esixabisekileyo kwimisebenzi yakhe yobambeleyo. Owona mthombo wakhe wengeniso uvela kumzi mveliso wefilimu onje ngothotho, iimuvi kunye nokunye. Wanelisekile ngumvuzo wakhe kwaye uphila ubomi obuqhelekileyo. Uvele kwiintengiso ezimbalwa kunye nokuprinta iintengiso, kwimibutho kunye neempawu ezinje ngePETA (Vumela i-Vegetarianism ikhule kuwe), i-UNICEF, iTouch, izihlangu zikaCandie, 1-800-Qokelela, i-Veet Depilatory Cream, i-Hi-C yeziqhamo zeZiselo, Ukuqokelelwa kwefashoni kweNFL yeWome nguAlyssa Milano, inkqubo yoKhathalelo lweNwele eseMpilweni, kunye neProActive.
Imilinganiselo yoMzimba ka-Alyssa Milano
Ukuthetha ngomlinganiso womzimba wakhe, unomzimba omncinci omncinci enobuso obuhle. Unoncumo olunomtsalane notsale abantu abaninzi. Unokuphakama okugqibeleleyo kwe-1.5 m okanye i-157 cm. Ubunzima bomzimba wakhe bujikeleze i-50 kg okanye i-110 lbs. Njengomdlali weqonga, ugcina umzimba wakhe, omncedayo ukuba ahlale esempilweni, elungile kwaye elungile. Umbala weenwele zakhe umnyama ngombala kwaye amehlo akhe amnyama. Umlinganiso womzimba wakhe ngu-37-24-33.
Izigaba: Tech-Iindaba Umqala Hollywood
ummi wentsimbi indoda iwotshi
ukujongwa kothando, ezothando kunye neelekese kwimbonakalo bhanyabhanya
steve kunye caroline bacic
ususanna thompson borg ukumkanikazi
Shannon gunz octane